Ingabe isakhamuzi saseNingizimu Afrika sidinga i-visa ukuze singene eVietnam? | Vietnamimmigration.com official website | e-visa & Visa On Arrival for Vietnam | Lowest Price Guarantee, From US$6
Ingabe isakhamuzi saseNingizimu Afrika sidinga i-visa ukuze singene eVietnam?
› Yini umehluko phakathi kwe-visa yokuVakasha ne-visa yeBhizinisi?
Abanikazi bamaphasipothi aseNingizimu Afrika abafuna ukuvakasha eVietnam bangabhalisa i-visa ehhovisini likamanxusa aseVietnam elisePitoli, Ningizimu Afrika, nansi ikheli: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa.
Uma ungenasikhathi noma uhlala kude, ungabhalisa i-visa etholwa lapho ufika.
I-Visa Etholwa Lapho Ufika (VOA) ngenye yohlobo lwe-visa ekhishwa nguMnyango WezokuFika waseVietnam enikeza izivakashi ezifisa ukungena ezweni. Sicela unake ukuthi ngokungafani nama-visa atholwa lapho ufika kwamanye amazwe, ukuze uthole i-visa etholwa lapho ufika yaseVietnam, kumele ube nencwadi egunyaza i-visa ebhalwe nguMnyango WezokuFika waseVietnam ekuvumela ukuthi uthathe i-visa yakho nxa ufika esikhumulweni sezindiza samazwe ngamazwe saseVietnam.
Uma ufuna ukuthatha i-visa yakho ngesikhathi lapho ufika esikhumulweni sezindiza samazwe onke saseVietnam, kufanele ubhalise ku-intanethi kuwebhusayithi ye-visa yaseVietnam noma uthintane nesisebenzi sakho esisebenza ngezohambo esihlala eVietnam ukuba sicele incwadi egunyaza i-visa kuMnyango WezokuFika waseVietnman.
Lapho ufika esikhumulweni sezindiza samazwe onke saseVietnam, kuzodingeka ukuthi ubakhombise incwadi egunyaza i-visa ukuze bagxivize i-visa yakho kuphasipothi.
I-visa yaseVietnam eyabantu baseNingizimu Afrika March 4, 2021
Yini umehluko phakathi kwe-visa yokuVakasha ne-visa yeBhizinisi? March 4, 2021
Uyini umehluko phakathi kweVisa Yezokuvakasha yaseVietnam neVisa Yebhizinisi LaseVietnam?
Yini umehluko phakathi kwe-visa ekungenisa kanye ne-visa ekungenisa kaningi? March 4, 2021
inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali lapho usebenzisa i-visa yaseVietnam nathi March 4, 2021
inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali lapho usebenzisa i-visa yaseVietnam nathi
Izinyathelo zokuthola “i-E-Visa yaseVietnam” March 4, 2021
Izinyathelo zokuthola “I-Visa YaseVietnam Etholwa Lapho Ufika” March 4, 2021